GEERIDU WAQTIGA QAAR KA WANAAGSAN NOLOSHU GENERAL SHAATIGUDUUD MARXUUM GEERIDII HORTEED GEERIDU AAN DIIDIN !!
03 April, 2016 in by Adam Increase
Xasan Maxamed Nuur oo ay saaxibadiisa wada shaqeynta u yaqaanaan HASANOW MANUUR waxaa uu ku rawaxay magaalada Bonn ee dalka Jarmalka maalintii Salaasada ahayd oo ay taariikhduna ku beegnayd 02. April sanadddii 2013. Halyey abaal marin ka gudoomay xa
Xasan Maxamed Nuur oo ay saaxibadiisa wada shaqeynta u yaqaanaan HASANOW MANUUR waxaa uu ku rawaxay magaalada Bonn ee dalka Jarmalka maalintii Salaasada ahayd oo ay taariikhduna ku beegnayd 02. April sanadddii 2013. Halyey abaal marin ka gudoomay xarunta dhismaha hindisaha nabadda iyo horumarinta cilmibaarsita shir sanadeedlihii ka dhacay boqortooyada Ingiriiska UK 04 Feberaayo sanaddii 2012 kii.
Shaatiguduud waxaa uu ahaa hogaamiyihii ururka Wax Iska Caabbinta Raxaweyn "Rahawein Resistant Army" oo marka la soo gaabiyo noqoneya RRA isagoona sido kale ahaa sarkaal nabad sugid awood badan leh NSS xiliyadii dawlladdii kacaankii Milatariga ahayd ee uu hor kacayey Maxamed Siyaad Barre. Marxuumka oo ku dhashay magaalada Baydhabo gobolka Baay xarunta Labaad dowllad gobolleedka Lixda Gobol Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sanadkii 1946 kii waxaa uu darajo sare kaga baxay kulyadda milatariga Madone ee waddanka Taliyaaniga isagoo taqasuskiisa qaaskana uu ahaa isgaarsiinta.
Jananku waxaa uu xitaa tababaro dhanka sirdoonka ah uu ku soo qaatay magaalada Qaahira ee xarunta Masar, magaalada Rooma caasimadda dalka Taliyaaniga, magaalada Baarliin ee magaala madaxda wadanka Jarmalka iyo Moosko oo ah halka looga taliyo dalweynaha Ruushka amaba Midowgii Soofiyeeti sanadahii 1980-maadkii.
1978 Janaraal SHaatiguduud sidoo kale waxaa uu darajo sare ka gaaray jaamacaddii Adeegga Qaranka Soomaaliyeed (SNU) isagoona kadib waajibkiisa qaran ku gudaneyey habka nabad sugidda gobollada Jubbada-Hoose iyo Jubbada-Dhexe ee Koonfur Galbeed Soomaaliya sanadihii 1972 illaa 1975 kii.
Waqooyi Galbeedna Jananku waxaa uu noqday madaxa maxkamadda amniga heerka gobol sanadihii 1980 illaa 1982 kii.
Sanadihii 1977 ilaa 1980 kii Janaraal SHaatiguduud waxaa uu ahaa qaadiga maxkamadda amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, sidaa iyo si la mid ahna jananku sanadihii 1982 ilaa 1984 kii waxaa uu ahaa gudoomiyihii gobolka Gedo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isagoona jagooyin kala duwan ee qaran uu soo kala qabanayey ilaa iyo ay ka dhacday dowlladdii uu garwadeenku ka ahaa Maxamed Siyaad Barre oo afka ciidda loo daray.
intii lagu guda jireyna dagaaladii sokeeye Janaraal Xasan Maxamed Nuur waxaa uu ka shaqeynayey dadaalada dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed isagoona shirkii Jabuuti dabadii bishii Juun ilaa Luuliyo sanadkii 1991-dii uu noqday wasiirkii arimaha gudaha ee dawlladdii ugu horaysay Kumeel Gaadh Soomaaliyeed ah waxaana masuulku sanadkii 1994 kii noqday xubin ka mid ah dadka tala-gooyayaasha ah ee maamulkii Digil-Mirifle (DMSGC).
Muhiimadda siyaadeed ee Janaraal Xasan Maxamed Nuur SHaatiguduud waxaa ay si weyn ula soo ifbaxday nidaamkii ururweynihii Koonfur Galbeed ee RRA sanadkii 1995 kii waqtigaas ee uu ahaa dhaliyihii ururweynihii ee aanu kor ku soo xusnay xiligaaso uu la kaashaday cuqaal-sharafeedka qaranwaynaha Digil-Mirifle ee uu madaxda u ahaa Allaha u naxariistee isna Malaaq Mukhtaar Malaaq Xasan Malaaqii malaaqyada beelweynta Digil-Mirifle.
13 kii Oktoobar sanadkii 1995 kii galbeedka Baydhabo JHafey goobta lagu magacaabo ee lagu aas aasay ururweynaha RRA ayaa Janaraal SHaatiguduud loogu doortay gudoonka ururka iyo hoggaanka dhaqdhaqaaqa kacdoonka ururkan oo ah ururkii ugu horeeyey milatari ahaan si dhaba u falgala durba oo ay yeeshaan dadyowga Digil-Mirifle Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taariikhda.
Xoog ku soo bambixiddii ururweynaha RRA waxaa ay ka dhalatay kadib markii duullaan-gardara-qaawan ah malleeshiyadii Maxamed Faraax Caydiid ay ku soo qaadeen magaalada Baydhabo gobolka Baay ee xarunta Labaad Lixda gobol Koonfur Galbeed Soomaaliya 17 bishii Sebtembar 1995 kii waqtigaasoo gabi ahaanba ay burburiyeen dowllad gobolleedkii Digil-Mirifle maamulkaasoo ay aas-aasteen dadka daga iskana leh inta u dhaxaysa Labada webi ismaamul-goboleed gudahooda ku-Meel-Gaadh ah la baxay Digil-Mirifle State bishii Maarso sanadkii 1995 kii maamulkaasoo ka koobnaa 2 aqal Gole Wakiilo iyo mid Fulinba.
Maamulkani waxaa uu ahaa maamulkii ugu horeeyey dadka gudahooda ay ismaamulaan ee ka unkama Koonfurta Soomaaliya kaasoo u adeegayey gobollada Baay, Jubbada-Hoose, Bakool, Jubbada-DHexe, Gedo, SHabeellada-Hoose iyo Banaadir ummadda ku nool waxaana madaxweyne ka ahaa Datoor Xasey ooisna rawaxay Allaha u naxariistee.
SHaqadii ugu weyneyd uguna cuslayd Allaha u naxariistee Janaraal Xasan Maxamed Nuur SHaatiguduud uu qabto waxaa ay ahayd inuu xoog gelsho ciidameeyana dhallinyarada labka iyo dhaddigga ama ragga iyo dumarka beelweynta Raxaweyn ama Digil-Mirifle ee dulmigu dushooda ku joogtadu noqday hadh iyo habeenba.
Horaantii sanadkii 1996-kiina ururka Wax Iska Caabbinta RRA ee uu hogaaminayey Janaraal SHaatiguudud waxaa uu weeraro waaweyn guul leh uu ku qaaday goobo muhiim ah oo uu hasytay Maxamed Faarax Caydiid badi dadaka Reer Koonfurkuna u yiqiineen Naardiir.
Intii lagu guda jiray shirkii dib u heshiisiinta iyo nabadda Soodare xarunta Adisababa ee dalka Itoobiya sanaddii 1997 kii jananku waxaa uu ku adkaystay in ururka waddaniga RRA uusan marnaba miiska wadahadalka la fariisan doonin kuwa xoogga ku haysta dhulka Digil-Mirifle ee ay u nasabka sheegtaan dhamaan goboollada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana uu jananku waqtigaa isagoo sii hadlayey hoosta ka xariiqay in "Wixii Xoog Lagaaga Qaataa Xoog uun Lagu Helayo".
Si kastooy ahaataba gumac rasaaseed iyo beynaad wixii boocda la iska gelshaba sanaddii 1998-kii waxaa si awood buuxda leh shan farood iyo calaacal kooxdii melleeshiyadii Caydiid looga xoreeyey gobolladii Koonfur Galbeed qaar ka mid ah sida Baay, Bakool iyo qaybo ka tirsan uruurka gobollada Gedo iyo SHabeellaha-Hoose.
Bishii May ilaa August sanaddii 2000 shirkii nabadda ee Carta dartii hawlgalladii milatari ee ururweynaha Rahawein Resistant Army RRA waxaa loo hakiyey si kumeel-gaadh ah iyado waqtigaasi laga raja qabay in dowlladdii xilligaasi ku-Meel-Gaadhka ahayd ee TNG bal uun keenayso nabad buuxda ama wax uun nabad ah lagu yara dago.
Labadaraalase markii dowlladdii Ku-Meel-Gaadhka ahayd ee Cabduqaasim ay fashilantay ayuunbuu ururweynaha RRA uu laba kacleeyey hawlgaladiisii Janaraal Xasan Maxamed Nuurna uu amaamuday maamul goboleed loo baxshay Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo jananku uu madaxweyne ka noqday sanaddii 2002 dii.
"Janaraal Xasan Maxamed Nuur runtii saaxiib qaali ah ayuu ahaa in ka badan 40 sanadood laakiinse sababo caafimaad dartood ma uusan sameyn kareyn shir-nabadeed oo annigu borofeysar Maxamed Xaaji Mukhtaar ah ku agasimay gudaha dalka boqortooyada Ingiriiska UK sanadkii la soo dhaafay", sidaa waxaa yiri Proff Maxamed Xaaji Mukhtaar oo horwadeen ka ah jaamicadda Savannah State University ee dalka Mareykanka.
Sido kale, Borofeysarka isago sii hadlayey ee uu ka sheekeynayey taariikhda Janaraal SHaatiuduud waxaa uu sheegay uuna yiri "Anigu shaqsiyan ka Proff Maxamed Xaaji Mukhtaar ah waxaan dhawaanadan kula hadlayey gudaha Cusbitalka Datoor Xasan Maxamed Nuur Shaatiguduud ee kuwa innaka inaga midka ah ee Janaraal Shaatiguduud noloshiisu ay taabanayso fadlan xusuustiisa aan qalbiyadeena ku hayno waqtiyadayadana u hurno inaan noloshiisi ugu dabbaaldagno si wanaagsan, Janaraal Xasan Maxamed Nuur SHaatiguduud Illaahay naxariistii Jannadii Firdows haka waraabiyo. ummaddii qoyskii iyo qaraabadii iyo waliba caruurtii uu ka tagey samir iyo iimaan buuxa Allaha ka siiyo anana samir iyo iimaan jamiil ah Eebbe ha inaga wada siiyo idilkeen waa uu inaga baxay Innaalillaahi Wa Inaa Illheyhi Raajicuun, Annaga llaahbaa Na Leh Xaggiisa ayaana u laaban doonaa".
Qoramadan Taariikhda oo Af Ingiriisi ah waxaa diyaariyey Proff Mukhtaar waxaana Af-Soomaali u turjumay ama u baddalay durbadiiba Ustad Adam Increase !!